daxweyne Xasan Sh. oo ka hadlay dagaalada Kismaayo, kuna baaqay inaysan Ciidamada Kenya garab la safan #farayarenews #twitterriixhalkaan #xjournalist Muqdisho, 29 June 2013– Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Somaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu ka hadlay dagaalada dib uga soo cusboonaaday Magaalada Kismaayo. Madaxweynaha oo ka hadlayey dagaaladda ka soo cusboonaaday Kismaayo ayaa yiri “ Waxaan markale ku baaqayaa in si sharuud la’aan ah loo joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday magaalada Kismaayo oo dhiig danbe oo Soomaaliyeed aan la daadin. Soomaalida wey ka soo daaleen collaado iyo dagaallo, xalna uma noqon karaan xasilinta dalka, nabad-ku wada noolaanshaha iyo horumarinta dhaqanka iyo dhaqaalaha dalka.” Sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa xusay inay Dowladiisu ku cel celisay inaan loo baahneyn dagaalo sokeeye oo dambe, oo uu ku daato dhiig Soomaaliyeed, bilaa macno. “Dowladdu dhowr jeer bey ku cel-celisay inaan loo baahneyn dagaal sokeeye iyo dhiig Soomaaliyeed oo macno daro ah ku daata. Dowladdu waxey wadaa qorshe dib-u- heshiisiineed oo xal waara loogu helayo arrimaha Kismaayo oo keenay collaado iyo dagaallo soo noq-noqday.” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa wuxuu tacsi tiiraanyo leh uu u diray qoyskii iyo qaraabadii, dadkii maanta ku wax yeeloobay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay Magaalada Kismaayo. “Waxaan u tacsiyeynayaa intii ku geeriyootay dagaaladdan oo aan Eheladdooda iyo Soomaalidaba uga baryayaa in EEBBE naxariistii janno ka waraabiyo iyagana Samir iyo Iimaan EEBBE ka siiyo. Inta dhaawaca ahna waxaan EEBBE uga baryayaa inuu caafimaad deg deg ah siiyo.” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya. Sidoo kale dhiilaha colaadeed iyo dagaalada ayuu sheegay inay keenaan kala fogaansho, taasi ayuuna ku macneeyay midda keentay inay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta beelaha degga Jubbooyinka. “Dagaallada iyo collaadahu waxey keenaan kala fogaansho, waana sababta aan u dooneyno in si nabad ah oo dib uheshiisiineed xal waara loogu helo dhammaan arrimaha taagan. 22sano oo collaado, dagaallo, dagaal oogayaal, dano gaar ah iyo mid qabiil-ba waa nagu filan-yihiin mana rabno in wiil Soomaaliyeed uu si macno daro ah ku geeriyoodo. Dowladdu wey ka go’antahay in la sii wado dadaallada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta.” ayuu yiri Madaxweynaha. Prof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu Ciidamada Dowladda Kenya uu uga digay inay garab gaar ah la saftaan, wuxuuna ugu baaqay inay dhex dhexaad ka ahaadaan. “Dowladdu waxey kaloo ugu baaqeysaa Ciidamada AMISOM ee ku-sugan Kismaayo inay dhex dhexaad ka noqdaan kooxaha kala duwan ee dagaaalamaya, isla markaana ay ka islaaxiyaan xabad-joojin oo ay ciidamada dagaalamaya kala dhexgalaan si looga hortago inay dagaaladdu sii socdaan, si fursad loo siiyo dib-u-heshiisiinta iyo wadahadallada. Waana in si deg-deg ah loogu gurmadaa gar-gaaridda dadka dhaawaca ah.” ayuu sii raaciyay Prof. Xasan Sheekh Maxamuud. | http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders daxweyne Xasan Sh. oo ka hadlay dagaalada Kismaayo, kuna baaqay inaysan Ciidamada Kenya garab la safan #farayarenews #twitterriixhalkaan #xjournalist Muqdisho, 29 June 2013– Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Somaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu ka hadlay dagaalada dib uga soo cusboonaaday Magaalada Kismaayo. Madaxweynaha oo ka hadlayey dagaaladda ka soo cusboonaaday Kismaayo ayaa yiri “ Waxaan markale ku baaqayaa in si sharuud la’aan ah loo joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday magaalada Kismaayo oo dhiig danbe oo Soomaaliyeed aan la daadin. Soomaalida wey ka soo daaleen collaado iyo dagaallo, xalna uma noqon karaan xasilinta dalka, nabad-ku wada noolaanshaha iyo horumarinta dhaqanka iyo dhaqaalaha dalka.” Sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa xusay inay Dowladiisu ku cel celisay inaan loo baahneyn dagaalo sokeeye oo dambe, oo uu ku daato dhiig Soomaaliyeed, bilaa macno. “Dowladdu dhowr jeer bey ku cel-celisay inaan loo baahneyn dagaal sokeeye iyo dhiig Soomaaliyeed oo macno daro ah ku daata. Dowladdu waxey wadaa qorshe dib-u- heshiisiineed oo xal waara loogu helayo arrimaha Kismaayo oo keenay collaado iyo dagaallo soo noq-noqday.” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa wuxuu tacsi tiiraanyo leh uu u diray qoyskii iyo qaraabadii, dadkii maanta ku wax yeeloobay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay Magaalada Kismaayo. “Waxaan u tacsiyeynayaa intii ku geeriyootay dagaaladdan oo aan Eheladdooda iyo Soomaalidaba uga baryayaa in EEBBE naxariistii janno ka waraabiyo iyagana Samir iyo Iimaan EEBBE ka siiyo. Inta dhaawaca ahna waxaan EEBBE uga baryayaa inuu caafimaad deg deg ah siiyo.” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya. Sidoo kale dhiilaha colaadeed iyo dagaalada ayuu sheegay inay keenaan kala fogaansho, taasi ayuuna ku macneeyay midda keentay inay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta beelaha degga Jubbooyinka. “Dagaallada iyo collaadahu waxey keenaan kala fogaansho, waana sababta aan u dooneyno in si nabad ah oo dib uheshiisiineed xal waara loogu helo dhammaan arrimaha taagan. 22sano oo collaado, dagaallo, dagaal oogayaal, dano gaar ah iyo mid qabiil-ba waa nagu filan-yihiin mana rabno in wiil Soomaaliyeed uu si macno daro ah ku geeriyoodo. Dowladdu wey ka go’antahay in la sii wado dadaallada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta.” ayuu yiri Madaxweynaha. Prof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu Ciidamada Dowladda Kenya uu uga digay inay garab gaar ah la saftaan, wuxuuna ugu baaqay inay dhex dhexaad ka ahaadaan. “Dowladdu waxey kaloo ugu baaqeysaa Ciidamada AMISOM ee ku-sugan Kismaayo inay dhex dhexaad ka noqdaan kooxaha kala duwan ee dagaaalamaya, isla markaana ay ka islaaxiyaan xabad-joojin oo ay ciidamada dagaalamaya kala dhexgalaan si looga hortago inay dagaaladdu sii socdaan, si fursad loo siiyo dib-u-heshiisiinta iyo wadahadallada. Waana in si deg-deg ah loogu gurmadaa gar-gaaridda dadka dhaawaca ah.” ayuu sii raaciyay Prof. Xasan Sheekh Maxamuud. – http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders
daxweyne Xasan Sh. oo ka hadlay dagaalada Kismaayo, kuna baaqay inaysan Ciidamada Kenya garab la safan #farayarenews #twitterriixhalkaan #xjournalist Muqdisho, 29 June 2013– Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Somaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu ka hadlay dagaalada dib uga soo cusboonaaday Magaalada Kismaayo. Madaxweynaha oo ka hadlayey dagaaladda ka soo cusboonaaday Kismaayo ayaa yiri “ Waxaan markale ku baaqayaa in si sharuud la’aan ah loo joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday magaalada Kismaayo oo dhiig danbe oo Soomaaliyeed aan la daadin. Soomaalida wey ka soo daaleen collaado iyo dagaallo, xalna uma noqon karaan xasilinta dalka, nabad-ku wada noolaanshaha iyo horumarinta dhaqanka iyo dhaqaalaha dalka.” Sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa xusay inay Dowladiisu ku cel celisay inaan loo baahneyn dagaalo sokeeye oo dambe, oo uu ku daato dhiig Soomaaliyeed, bilaa macno. “Dowladdu dhowr jeer bey ku cel-celisay inaan loo baahneyn dagaal sokeeye iyo dhiig Soomaaliyeed oo macno daro ah ku daata. Dowladdu waxey wadaa qorshe dib-u- heshiisiineed oo xal waara loogu helayo arrimaha Kismaayo oo keenay collaado iyo dagaallo soo noq-noqday.” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa wuxuu tacsi tiiraanyo leh uu u diray qoyskii iyo qaraabadii, dadkii maanta ku wax yeeloobay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay Magaalada Kismaayo. “Waxaan u tacsiyeynayaa intii ku geeriyootay dagaaladdan oo aan Eheladdooda iyo Soomaalidaba uga baryayaa in EEBBE naxariistii janno ka waraabiyo iyagana Samir iyo Iimaan EEBBE ka siiyo. Inta dhaawaca ahna waxaan EEBBE uga baryayaa inuu caafimaad deg deg ah siiyo.” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya. Sidoo kale dhiilaha colaadeed iyo dagaalada ayuu sheegay inay keenaan kala fogaansho, taasi ayuuna ku macneeyay midda keentay inay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta beelaha degga Jubbooyinka. “Dagaallada iyo collaadahu waxey keenaan kala fogaansho, waana sababta aan u dooneyno in si nabad ah oo dib uheshiisiineed xal waara loogu helo dhammaan arrimaha taagan. 22sano oo collaado, dagaallo, dagaal oogayaal, dano gaar ah iyo mid qabiil-ba waa nagu filan-yihiin mana rabno in wiil Soomaaliyeed uu si macno daro ah ku geeriyoodo. Dowladdu wey ka go’antahay in la sii wado dadaallada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta.” ayuu yiri Madaxweynaha. Prof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu Ciidamada Dowladda Kenya uu uga digay inay garab gaar ah la saftaan, wuxuuna ugu baaqay inay dhex dhexaad ka ahaadaan. “Dowladdu waxey kaloo ugu baaqeysaa Ciidamada AMISOM ee ku-sugan Kismaayo inay dhex dhexaad ka noqdaan kooxaha kala duwan ee dagaaalamaya, isla markaana ay ka islaaxiyaan xabad-joojin oo ay ciidamada dagaalamaya kala dhexgalaan si looga hortago inay dagaaladdu sii socdaan, si fursad loo siiyo dib-u-heshiisiinta iyo wadahadallada. Waana in si deg-deg ah loogu gurmadaa gar-gaaridda dadka dhaawaca ah.” ayuu sii raaciyay Prof. Xasan Sheekh Maxamuud.
daxweyne Xasan Sh. oo ka hadlay
dagaalada Kismaayo, kuna baaqay
inaysan Ciidamada Kenya garab la safan
Muqdisho, 29 June 2013– Madaxweynaha
Dowladda Federalka ee Somaliya Prof. Xasan
Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu ka hadlay
dagaalada dib uga soo cusboonaaday Magaalada
Madaxweynaha oo ka hadlayey dagaaladda ka
soo cusboonaaday Kismaayo ayaa yiri “ Waxaan
markale ku baaqayaa in si sharuud la’aan ah loo
joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday
magaalada Kismaayo oo dhiig danbe oo
Soomaaliyeed aan la daadin. Soomaalida wey ka
soo daaleen collaado iyo dagaallo, xalna uma
noqon karaan xasilinta dalka, nabad-ku wada
noolaanshaha iyo horumarinta dhaqanka iyo
dhaqaalaha dalka.” Sidaasi waxaa yiri
Madaxweynaha ayaa xusay inay Dowladiisu ku
cel celisay inaan loo baahneyn dagaalo sokeeye
oo dambe, oo uu ku daato dhiig Soomaaliyeed,
“Dowladdu dhowr jeer bey ku cel-celisay inaan
loo baahneyn dagaal sokeeye iyo dhiig
Soomaaliyeed oo macno daro ah ku daata.
Dowladdu waxey wadaa qorshe dib-u-
heshiisiineed oo xal waara loogu helayo
arrimaha Kismaayo oo keenay collaado iyo
dagaallo soo noq-noqday.” ayuu yiri
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha ayaa wuxuu tacsi tiiraanyo leh
uu u diray qoyskii iyo qaraabadii, dadkii maanta
ku wax yeeloobay dagaaladii cuslaa ee ka
dhacay Magaalada Kismaayo.
“Waxaan u tacsiyeynayaa intii ku geeriyootay
dagaaladdan oo aan Eheladdooda iyo
Soomaalidaba uga baryayaa in EEBBE naxariistii
janno ka waraabiyo iyagana Samir iyo Iimaan
EEBBE ka siiyo. Inta dhaawaca ahna waxaan
EEBBE uga baryayaa inuu caafimaad deg deg ah
siiyo.” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
Sidoo kale dhiilaha colaadeed iyo dagaalada
ayuu sheegay inay keenaan kala fogaansho,
taasi ayuuna ku macneeyay midda keentay inay
ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta beelaha degga
“Dagaallada iyo collaadahu waxey keenaan kala
fogaansho, waana sababta aan u dooneyno in si
nabad ah oo dib uheshiisiineed xal waara loogu
helo dhammaan arrimaha taagan. 22sano oo
collaado, dagaallo, dagaal oogayaal, dano gaar ah
iyo mid qabiil-ba waa nagu filan-yihiin mana
rabno in wiil Soomaaliyeed uu si macno daro ah
ku geeriyoodo. Dowladdu wey ka go’antahay in
la sii wado dadaallada nabadeynta iyo dib u
heshiisiinta.” ayuu yiri Madaxweynaha.
Prof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu
Ciidamada Dowladda Kenya uu uga digay inay
garab gaar ah la saftaan, wuxuuna ugu baaqay
inay dhex dhexaad ka ahaadaan.
“Dowladdu waxey kaloo ugu baaqeysaa
Ciidamada AMISOM ee ku-sugan Kismaayo inay
dhex dhexaad ka noqdaan kooxaha kala duwan
ee dagaaalamaya, isla markaana ay ka islaaxiyaan
xabad-joojin oo ay ciidamada dagaalamaya kala
dhexgalaan si looga hortago inay dagaaladdu sii
socdaan, si fursad loo siiyo dib-u-heshiisiinta iyo
wadahadallada. Waana in si deg-deg ah loogu
gurmadaa gar-gaaridda dadka dhaawaca ah.”
ayuu sii raaciyay Prof. Xasan Sheekh Maxamuud.
→ #farayarenews Sheekh Xasan Daahir Aweys oo soo gaaray Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo xubno kale ayaa waxay goor dhow soo gaareyn Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, kadib markii ay ka soo amba baxeyn Magaalada Cadaado. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo muddo toddobaad kahor isaga soo goystay Ururka Al Shabaab, ayaa wuxuu gelinkii dambe ee maanta uu aqbalay in loo duuliyo Magaalada Muqdisho. Diyaarada Xasan Daahir Aweys ka soo qaaday Magaalada Cadaado, ayaa waxaa kaloo la socda Ergayda Khamiistii soo gaartay Cadaado iyo sidoo kale Madaxweynaha Maamulka Ximin & Xeeb. Wararka ayaa waxay sheegayaan in si weyn loo adkeeyay ammaanka Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, iyadoo uu hakad ku yimid dhaq dhaqaaqii guud ee ka jiray Magaalada Muqdisho. Kooxo Suxufiyiin ah ayaa waxay heegan ku yihiin Garoonka Aadan Cadde, iyadoo lagu soo waramaayo in la filaayo in uu shir jaraa’id uu ku qabto Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo dhinacyada kale ee la socda qaarkood. Waa suurta gal in Sheekh Xasan Daahir Aweys uu ka biyo diido in uu ka soo muuqdo shirka jaraa’id, ee Wariye-yaasha loogu yeeray in loogu qabanaayo Garoonka Aadan Cadde, maadaama uu horeyba uga biyo diiday intii uu ku sugnaa Magaalada Cadaado. Dowladda Somaliya ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka biyo diiday in Sheekh Xasan Daahir Aweys, uu diyaar gaar ah uu ka raaco Magaalada Cadaado, si ay u geyso dal seddexaad.
← War Deg Deg Ah: #xjounalist #farayarenews Meydadka Afar Askari Oo Ciidamada Kenya oo Ay Soo Bandhigeen Ciidamada Barre Hiiraale Jun 29, 2013 – jawaab Dagaalkii ayaa galay waji cusub iyadoo ay dagaalkan si toos ah ugu jiraan ciidamada lugta dawlada kenya oo garabsiinaya kooxda Raaskambooni,waxaana la sheegayaa in dagaalkan hadda socda uu khasaare ka soo gaarey ciidamada dawlada kenya ee qaabka nabad ilaalinta ah ku jooga kismaayo. Dhimashada Afar askari oo ka tirsan ciidamada kiiniya ayaa hadda la shaaciyey in ciidamada degaanku gacanta ku dhigeen isla markaasna doonayaan inay saxafada u soo bandhigaan,waxaana la sheegayaa in ciidamada degaanku dagaalkan ay hada kula jiraan ciidamada kiniya iyo jabhadda Raaskambooni u bedeleen qaabkii dagaalka,waxaana la sheegayaa in hadda wadooyinka magaalada si toos ah loogu dagaalamayo. Ciidamada degaanka ayaa sheegey in saacadaha soo socda saxafada u soo bandhigi doonaan maydadka ciidamada kiiniya isla markaasna ay shaacin doonan in dawlada kiiniya ay doonayso inay dalka soomaaliya u kala jabiso qaab qabiil iyadoo la shaacinayo in ciidamada kiiniya arrintaasi dhibaato xoogan ka soo food saari doonto. Xaalada ayaa ah mid cakiran,waxaana ay hadda u muuqadda in xabadi sii qaboobayso isla markaasna ciidamada kiiniya iyo kuwa raaskambooni ay ku sugan yihiin xaafado tiro yar oo ka mid ah xaafadaha magaalada kismaayo iyadoo la arkayo shacabka oo dagaal waji cusub leh u diyaar garoobaya isla markaasna doonayaan inay mawqifkooda soomaalinimo muujiyaan si ciidamada kiiniya iyo kuwa jabhadda Raaskambooni looga quusiyo gudaha kismaayo. Ugu dambeyntii inkastoo dagaalkan hadda yahay mid qaboobay hadana waxa khasaare lixaad leh ka soo gaaray shacabka magaalada kismaayo iyadoo ciidamada kiiniya si arxan darro ah magaalada ugu garaaceen madaafiicda cusub oo aan soomaaliya hore looga isticmaalin balse wax horumar ah u sameyn waayey.